Maxay ka wada hadleen Madaxweynaha Soomaaliya iyo Xoghayaha Qaramada Midoobey? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Maxay ka wada hadleen Madaxweynaha Soomaaliya iyo Xoghayaha Qaramada Midoobey?
Maxay ka wada hadleen Madaxweynaha Soomaaliya iyo Xoghayaha Qaramada Midoobey?
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ayaa maalintii shalay la kulmey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud, kulanka ayaa bar-barsocdey shirkii dalalka Midowga Africa (AU) uga socdey magaalada Adis-ababa ee dalka Itoobiya.
Xassan Shiikh iyo Ban Ki-moon ayaa ka wada hadley horumarka dalka Soomaaliya iyo guuliihii u danbeeyey ee horusocodka ahaa.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa Madaxweynaha Soomaaliya ugu hanbalyeeyey doorashadii la doortey iyo hoggaamintiisa, waxaana Mr. Ban Ki-moon muujiyey sida uu ugu qanacsan yahay dedaalka la bixiyey iyo natiijadda ka soo baxdey dhulkii laga saarey kooxda al-Shabaab, waxaana uu ku nuux-nuuxsadey sida loogu baahan yahay in dedaalkaas la sii wado, iyada oo la taageerayo ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Soomaaliya.
Ban Ki-moon ayaa Xassan Shiikh ku dhirigeliyey ballaarinta iyo adkeynta xukuumadiisa, waxaana uu ka codsadey in uu wada hadal iyo wada shaqeyn la furo maamulada Puntland iyo Somaliland.
Xogahayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa ku cel-ceiyey sida uu uga wel-welsan yahay xuquuqda aadanaha, gaar ahaan kufsiga ka dhanka ah haweenka, waxaana uu xukuumadda Soomaaliya ka codsadey in ay muhimad gaar ah siiyaan in la dhawro xuquuqda aadana, isla markaana ilaaliyaan haweenka iyo caruurta.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhankisa kala hadley sida loogu baahan yahay in Qaramada Midoobey ay u sii ballaariyaan dedaalkooda ku aadan Soomaaliya, waxaana uu ka codsadey in dhamaan xafiisyada hay’adaha Qaramada Midoobey ee ku sugan dalka Kenya ay muhim tahay in ay u soo wareegaan Muqdisho maadaama UNPOS hadda ay halkaas ku shaqeyso, Sidoo kale Madaxweynaha ayaa la soo qaadey Ban Ki-moon qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalalka deriska la ah Soomaaliya iyo sidii loogu samayn lahaa qorshe ay dalkooda dib ugu soo laabtaan.
Madaxweynaha ayaa Xoghayaha Qaramada Midoobey kala hadley sidii Soomaaliya wax loogala qaban lahaa soo celinta caddaaladda, maamulka iyo maareynta dhaqaalaha iyo tabbabarada laamaha amniga.
Kulanka labada masuul ayaa jawi wanaagsan ku soo dhamaadey iyo si afgarad, waxaana Madaxweynaha Soomaaliya ballan qaadey in ay kor u qaadi doonaan arrimaha xuquuqda aadana, ilaalinta dadka jilicsan iyo ka hortaga shaqaaqooyinka haweenka ka dhanka ah.